ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း…. | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း….	Posted by mm thinker on May 29, 2008
Posted in: Announcement, Experience.	Tagged: Announcement, Nargis.	Leaveacomment
ဘယ်သူ့ကိုမှ သံချောင်းမခေါက်ဖြစ်ဘဲ မြန်မာပြည်ပြန်သွားခဲ့ရာက အခုလေးတင်ပဲ ပြန်ရောက်ပါပြီ။ ရောက်ရောက်ချင်း ရေချိုး၊ အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး ဘလော့ဂ်ကို ၀င်ရပါတယ်။ ကျနော် မရှိတဲ့ ၁၀ ရက်အတွင်း စပန်းကော်မန့်ပေါင်း ရာဂဏန်းလောက် ၀င်နေတာရယ်၊ ဘလော့ဂ်ကို ၀င်ချင်တာရယ်ကြောင့်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က ဒေါက်ဖြုတ်နေသလား၊ ဆာဗာကြောင့်လားမသိ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ကြော်ညာကော်မန့်တွေ ၀င်နေပါတယ်။
သတင်းဆိုးကတော့ နာဂစ်အလွန်ကူညီရေးနဲ့ ပြန်လည် ကယ်ဆယ်ရေးဟာ ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုနေသေးကြောင်းနဲ့၊ ကူညီမှုအရှိန်ကို မလျှော့ဖို့၊ ပိုမို ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးကြဖို့ အကြံပြုချင်တာပါပဲ။
အဆိုးထဲက အကောင်းအဖြစ် သတင်းကောင်းပေးချင်တာကတော့ ကျနော့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ပရိသတ်များများအတွက် ပုံနှိပ်ဖော်ပြီး၊ မဖော်ပြရသေး၊ လက်ရေးမူကြမ်း စာ၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများစွာ သယ်ဆောင်လာကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ရော လူပါ မောလွန်းလို့ ခဏလောက် နားပရစေဦး။ ပြီးရင် သူတ ရသ စုံလင်အောင် ရေးသားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း….။
ညနေ ၇: ၂၉
၂၉၊ မေ၊ ၂၀၀၈
← Friends of Burma	ရန်ကုန် လည်ပြန် →	0 comments on “ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း….”
စိုးထက် - Soe Htet ! on May 29, 2008 at 7:49 am said:
Welcome Back !🙂
Reply	ဟန်သစ်ငြိမ် on May 29, 2008 at 9:13 am said:
ရွှေပြည်ကြီးက ပြန်လာပြီး ရွှေသတင်းနဲ့ ရွှေစာမူတွေပါ သယ်လာတာကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ရွှေရည်တွေသောက်ပြီး ရွှေချုပ်ကြီးအကြောင်း အတင်းတုတ်ကြတာပေါ့။
Reply	အိမ်း on May 29, 2008 at 11:23 am said:
Reply	မောင်မျိုး on May 29, 2008 at 11:08 pm said:
သယ်ဆောင်လာတဲ့ အတွေ့ ကြုံတွေကို စောင့်မျှော် အားပေးနေပါတယ် 🙂
Reply	MhawSayar on May 30, 2008 at 6:36 pm said:
ကြိုဆိုပါ၏ဗျာ။ ပြန်ရောက်တာ မသိလိုက်ဘူး။ အခုမှ ရောက်ဖြစ်လို့.🙂
Reply	heartmuseum on May 31, 2008 at 2:12 am said:
Ok! စောင့်ဖတ်မယ်ဗျာ။ ရေးသာရေး ဖတ်ဖို့ ၀န်မလေး